Mexico " Journey-Assist - Torapasika, toetrandro, miantsena, sakafo, mahaliana
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Amerika Avaratra » Meksika
Fantaro an'i Mexico
Meksika amin'ny voninahiny rehetra
Mexico dia firenena any Amerika Avaratra, izay misy kolontsaina Espaniôla, Indianina ary Karaiba mifangaro mifangaro mifamatotra. Manintona ireo mpizahatany manana morontsiraka tsara indrindra amin'ny Riviera Maya sy Cancun, tsangambaton'ny sivilizasiôna taloha, ny antsitrika, ny tequila, ny nahandro mahaliana ary ny disko mandoro.
Inona no tokony hatao any Mexico
Afaka miala sasatra ao amin'ireo trano fandraisam-bahiny malaza any Cancun sy Acapulco ireo tia amoron-dranomasina. Ny Acapulco dia manana moron-dranomasina toa an'i Caleta sy Caletilla, ary koa ny farihin'i Pie de la Cuesta. Cancun dia bara fasika lava mirefy 25 km izay mankany amin'ny Ranomasina Karaiba any amin'ny Saikinosy Yucatan. Ny morontsiraka any Mexico dia fasika malefaka mahafinaritra, masoandro mamiratra foana, zavamaniry hafahafa, rano madio turquoise ary karazan-javamaniry sy biby any anaty rano. Ilaina kokoa ny tonga any Mexico hanao fialantsasatra amoron-dranomasina amin'ny volana oktobra-aprily. Mandritra io vanim-potoana io, madio ny andro ary mafana, saika tsy misy rotsakorana.
Ny fialantsasatra mavitrika any Mexico
Na izany aza, manokatra ny fahafahan'ny mpankafy fialam-boly mavitrika i Mexico - snorkeling, antsitrika, surf ary jono. Cancun dia manana tranombakoka anaty rano mahaliana. Toa tanàna rendrika misy ny sisa tavela amin'ny sivilizasiôna taloha. Ny sary sokitra rakotra haran-dranomasina any amin'ny fanambanin'ny ranomasina dia misy fiatraikany maharitra. Na dia avy any Cancun aza izy ireo dia manao fitsangatsanganana any amin'ny sisa tavela amin'i Chichen Itza, tanàna masin'ny Maya taloha.
Museum Mahatalanjona lalina any Cancun
Rava ny tanàna masina ao Chichen Itza any Mexico
Any Mexico, mpitsangatsangana no atolotra fitsangantsanganana tena mahaliana. Ny faritanin'ity firenena ity dia ny fonenan'ny sivilizasiôna taloha maro. Eto ianao dia afaka mifankahalala amin'ny tantara sy ny kolontsain'ny Maya, Toltecs ary Aztec. Fitsangatsanganana maro no misy ny fitsidihana ireo ivon-toeran'ny fanjakana taloha - Palenque, Teotihuacan, Chichen Itza ary Uxmal.
Palenque - ivon'ny fanjakana taloha
Teotihuacan any Mexico
Ny tanàna taloha Uxmal ao Meksika
Teotihuacan dia any amin'ny 50 km monja miala ny renivohitry ny tanànan'i Mexico. Misy tsangambato maritrano marobe, izay maro no manana anarana "miteny", ary tena mahavariana ny endrik'izy ireo. Ireo no tempolin'i Quetzalcoatl sy Feom-borona, ny lapan'i Quetzal-Papalotl, lolo sy Jaguar, ny piramidan'ny volana sy ny masoandro, ny làlan'ny maty.
Lalan'ny Maty any Teotihuacan, Mexico
Faharatsiana amin'ny fitsangatsanganana any Mexico
Ny tsy fahampian'ny fandehanana mankany Mexico (ho an'ny mponina any Eropa sy Azia) dia ny sidina lava, izay mamaritra ny sandan'ny tapakila fiaramanidina. Fa amin'ny lafiny hafa, firenena iray lavorary tanteraka izany.
Toetany any Mexico
Any amin'ny tapany avaratr'i Mexico, misy karazan-toetr'andro tsy mitongilana, ary any atsimo - tropikaly. Any amin'ny morontsiraka amoron-dranomasina (Cancun sy Acapulco), ny isotherm amin'ny ririnina dia +26, ary ny fahavaratra dia +35. Eto amin'ity firenena ity, ny taona dia mizara amin'ny vanim-potoana maina (hatramin'ny Oktobra ka hatramin'ny Aprily) ary mando (manomboka Mey ka hatramin'ny septambra), tsy mitovy amin'ny haavon'ny rotsakorana sy ny hamandoana. Misy rivo-doza manomboka amin'ny Aogositra ka hatramin'ny Oktobra.
Esory ny hafanan'ny rano
Ny mari-pana ao Mexico
Endrika toetrandro Meksika
Mampiavaka ny toetr'andro meksikana ny fiovan'ny hafanan'ny haavo avo. Rehefa manjaka manakaiky ny ranomasina ny hafanana amin'ny fahavaratra, dia milay be any amin'ny havoana - sahabo amin'ny +15. Indraindray misy rivodoza eto amin'ity firenena ity, indrindra amin'ny morontsirak'i Karaiba.
Fotoana tsara indrindra mandehandeha any Mexico
Ny vanim-potoana mety indrindra amin'ny dia mankany amin'ity firenena ity dia manomboka amin'ny Novambra ary maharitra hatramin'ny Aprily. Amin'izao fotoana izao, ny mari-pana amin'ny rivotra dia miorim-paka ary mitazona ao anatin'ny + 25 ... + 30. Amin'ny ririnina, amin'ny ankamaroan'ny faritanin'i Meksika, izay misy haavo tsy mihoatra ny 1 m, ny mari-pana dia saika tsy ambanin'ny +600 mihitsy. Ny volana amin'ny fiandohan'ny vanim-potoana orana dia Jona, ary mifarana amin'ny volana septambra ity.
Weather in Mexico ankehitriny + forecast
Safidio ny sosona ilainao ary alaivo ny fanazavana ilainao. Fanetrentena, hafainganam-pandeha, onja, orana, rahona any Mexico. Izany rehetra izany dia misy ao amin'ny Widget etsy ambany.
Fiantsenana any Mexico
Any Mexico, dia matetika ireo souvenir izay mahaliana eto. Any amin'ny faritra rehetra amin'ny firenena dia manolotra vokatra marobe tsy manam-paharoa amin'ny vidiny mora.
Ny fividianana kiraro sy ny akanjo dia azo atao ao amin'ny toeram-pivarotana, hita ao amin'ireo tanàna lehibe sy tsena. Arahina ny haka kitapo lehibe kokoa, noho ny habetsahan'ny souvenir tany am-boalohany, mpizahatany maro no voatery mividy kitapo fanampiny eny an-toerana.
Aza adino fa voarara ny manondrana any Mexico:
Akanjo hoditra tena izy.
Vokatra avy amin'ny akorandriaka, ary koa volom-borona avy amin'ny vorona quetzal.
Eto amin'ity firenena ity dia mifanentana na aiza na aiza ny mpiantsena amin'ny fividianana entana, ankoatra ireo toeram-pivarotana sy fivarotana marika. Eny an-tsena sy ny fivarotana kely, ny mpivarotra dia nihoatra ny antsasaky ny antsasaky ny vidiny. Arakaraka ny entana amidinao amin'ny fotoana iray amidy, dia ny fihenam-bidy azonao ianteherana.
Tsy tokony manantena ianao fa afaka mamerina ny vola, raha tsy mifanaraka aminao ny entana novidy. Ny fanazaran-tena dia mampiseho fa any Mexico dia saika tsy azo atao izany. Noho izany alohan'ny hividianana dia zava-dehibe ny manara-maso tsara ny vokatra ary ataovy azo antoka fa momba ny kalitao.
Tsy tokony hahemotra ny fividianana ny zavatra tianao indrindra, satria zavatra marobe no vita tanana, ka any an-toeran-kafa dia tsy hiasa izy ireo. Ankoatr'izay, tranombarotra maro tsy tsy misokatra isan'andro.
Ny ankamaroan'ny fivarotana dia miasa manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 20, fa ny fihenam-bidy siesta dia mety haharitra 13 ka hatramin'ny 16. Ny toeram-pivarotana miasa matetika matetika amin'ny 9 ka hatramin'ny 22. Ny toeram-pivarotana sy boutika amin'ny toeram-pivarotana matetika dia miasa tsy misy fitsaharana.
Ny ankamaroan'ny vokatra eo an-toerana dia amidy isan-taona amin'ny vidiny tokana. Ny akanjo marika dia amidy amin'ny fihenam-bidy mandritra ny varotra, izay atao eto amin'ny andro voalohany amin'ny taona sy amin'ny andro farany amin'ny fahavaratra.
Ny peso Meksikana dia vola any Mexico
Ny vola any Meksika dia Peso Meksikana. Fa afaka mandoa any amin'ny fivarotana sy ny hotely, toy ny peso Meksikana, ary ny dolara amerikana. Saingy amin'ny fiovana dia saika hahazo vola Meksikana foana ianao. Saingy tsy maintsy mandoa hetra isika, ny taham-pahafahana fanovana dia ho akaiky araka izay azo atao amin'ny tahan'ny bankin'ny ivon-toerana.
Ny lovia Meksikana dia marihina amin'ny alàlan'ny fahalemena sy ny sakafo mahavelona. Mirakitra otrikaina sy singa marobe izy ireo noho ny fampiasana be dia be ny legioma sy voankazo. Ny fomba fahandro meksikanina dia samy hafa be, fa be dia be ny hanina be dia be, rehefa mampiasa tsiran-tsoavaly izy ireo.
Ny sakafo fahita indrindra amin'ny fandrahoana sakafo meksikana dia legioma, legioma, katsaka ary hazan-dranomasina. Lovia Meksikana maro no vita amin'ny katsaka, ao anatin'izany:
Tacos - mofomamy misy famenoana isan-karazany
Tacos Meksikana (tacos)
Tortilla - tortilla katsaka
Tortilla. Mofomamy voasarimakirana misy famenoana isan-karazany
Posole - lasopy vita amin'ny hena sy katsaka
Posole - lasopy Meksikana
Tamale - tortillas katsaka misy saosy samihafa
Nachos - sombin-tortilla maina miaraka amin'ny topping isan-karazany
Nachos - Chips an'ny Tortillas katsaka
Tortilla dia karatra mpitsidika an'i Mexico. Ny tortilla vita amin'ny koba katsaka toy izany dia ampiasaina ho lovia tsy miankina ary ho toy ny akora ao anaty lovia hafa. Burrito, fajita, enchinadas ary papatzules no anaovana azy.
Ny mpahandro Meksikana dia matetika manampy karazan'orana dipoavatra, tongolobe, ravina avocado, voan-komina, tongolo gasy amin'ny lovia malaza. Ny saosy meksikana guacamole sy salsa dia nahazo fankatoavana lavitra tany amin'ny sisin'i Mexico.
Sakafo guacamole meksikana
Saosy Salsa meksikana
Anarana ofisialy: Etazonia Meksika
Renivohitra: Mexico City
Kaody finday: 52 +
Sandam-bola: Peso Meksikana ($ - MXN)
Sehatra Internet: .mx